रोकिएन सुनको मूल्य घट्ने क्रम, आज पनि अचम्मित पार्ने किसिमले घट्यो : हेर्नुहोस् कति पुग्यो ! – Nepali Taja Khabar
काठमाडौँ,स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ८८ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार गर्ने सकिनेछ भने सोही परिमाणको तेजावी सुन ८८ हजार ३५० रुपैयाँमा कारोबार गर्न सकिनेछ ।
महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला ५०० रुपैयाँ घटेको हो । यता, चाँदीको भाउमा पनि गिरावट आएको छ । हिजो एक हजार ३५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज एक हजार ३३५ रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ ।
श्रीमती माडवारीको घरमा काम गर्ने गर्थिन । श्रीमानलाई पनि चासो लाग्यो कस्तो घरमा काम गर्ने रहेछन् श्रीमतीले ? त्यसपछि उनले आफु पनि हेर्न जान खोजे । यहि कुरामा उनीहरुको सम्बन्ध विग्रियो प्रेम गरेर विवाह गरेकी श्रीमतीले छोडेर गएपछि एक महिना निकै कठिन भयो ।
संखुवासभा स्थायी घर भएका दिपक कार्कीको घटना हो यो । उनी काठमाडौमा बसेर ज्याला मजदुरीको काम गर्दै आएका थिए । विवाह पछि पनि उनको काम नियमित थियो । विहान ६ वजे उनी काममा निस्कन्थे । श्रीमती पनि काममा जान्थिन् । दुई वर्ष अघि उनीहरुको विवाह भएको हो ।
विवाह दर्ता भने भएको छैन । ससुराली तर्फ उनीहरु जाने आउने गर्थे तर आफ्नो घरमा भने श्रीमतीलाई लगेका थिएनन् । श्रीमतीले माडवारीको घरमा सरसफाइको काम गर्छु भनेर सुनाएको बताए । आफु हेर्न जान्छु भन्दा माडवारीको घरमा लोग्ने मान्छे लिएर जाँदा मालिक रिसाउँछ जान मिल्दैन भनेर उनले भनिन् ।
त्यही भएर उनी गएनन् । हराउनु भन्दा अघि पनि उनीहरुबीच केही विवाद भएको थिएन । तर एक्कासी एक महिना अघि श्रीमती हराइन् । अहिले उनी बेहाल अवस्थामा श्रीमती आउँछन् की भनेर बाटो हेरेर बसेको बताउँछन् । अहिले पनि आउँछ की भन्ने आश लाग्छ, अर्कोसंग विवाह नै गरेर जाने खालको त थिएन उनले भने ।
श्रीमती हिडेको दिन पनि उनी विहान ६ वजे नै काममा निस्केका थिए । श्रीमतीले खाना बनाएर राखिदिएको रहेछ १० वजे आएर खाना खाए । तर साँझ फेरी कोेठामा फर्किएर आए तर श्रीमती आएको थिइनन् । श्रीमती विरामी जस्तै थिइन् त्यसैले उनलाई निकै चिन्ता लाग्यो ।
फोन पनि अफ थियो । त्यसैले अप्ठेरोमा परिन् की भनेर उनलाई थप चिन्ता भयो । दुई चार दिन भैसक्यो, आफुले जानेसम्म सबैतिर खोजतलास गरिसके तर श्रीमती फेला परेकी छैनन् । प्रहरीमा उजुरी दिएको भएपनि फेला पार्न नसकेपछि उनी मिडियामा आएको बताएका छन् ।
बीबीसी,हाल बेलायतको लन्डनमा बस्दै आएकी बा’रबेडियन पप गायिका रि’हाना ब्रि’टेनका अर्बपति म्यु’जिसियनको सूचीको टप स्थानमा पर्न सफल भएकी छन्। गायक स’र्ज ए’ल्टन जो’न र मि’क ज्या’गरलाई उ’छिन्दै चार सय ६८ मि’लियन यु’रोसहित उनी ब्रि’टेनका अर्बपति म्यु’जिसियनको तेस्रो स्थानमा प’र्न सफल भएकी हुन्।
लन्डनको द स’न्डे टाइम्सले सार्वजनिक गरेको यो लि’स्टको पहिलो स्थानमा आठ सय मि’लियन यु’रोसहित ए’न्ड्रयु लो’यड वे’बर र पल म्या’ककार्टनी पहिलो स्थानमा छन्। गायिका, नायिका, लेखक तथा व्य’वसायी रि’हानाको कमाइको धेरै प्रतिशत ‘फे’न्टी ब्यु’टी’ नामक क’स्मेटिक ब्रा’न्डको हो।
उक्त ब्रा’न्डमा भएको उनको १५ प्रतिशत हि’स्सा तीन सय ५१ मि’लियन युरो रहेको बताइएको छ। सन्डे टा’इम्सको वार्षिक अर्बपतिको सूची तयार पा’र्ने रो’बर्टले रि’हानाको यो स्थानले सबैलाई अ’च्चमित बनाएको बताए। उनले भने, ‘रि’हाना लन्डनमा ब’स्छिन् भन्ने कुरा कमैलाई थाहा छ।
अब उनी यूकेका अर्बपति म्यु’जिसियनको पहिलो स्थानमा पर्न सक्छिन्।’ ३२ वर्षीया गायिका रि’हाना ब्रि’टेनका अर्बपति म्यु’जिसियनको लि’स्टमा पर्ने युवा गायिका हुन्। अर्बपति म्यु’जिसियनको लि’स्टमा प’र्न सफल भए पनि उनले वि’गत पाँच वर्षदेखि कुनै नयाँ एल्बम सार्वजनिक गरे’की छैनन्।
सन् २००५ मा म्यु’जिक अ’प द स’न् गीतबाट चर्चामा आएकी उनको पछिल्लो ए’ल्बम ए’न्टी ९२०१६० हो। ब्यु’टी ब्रा’न्डका कारण यस लि’स्टको तेस्रो स्थान उ’क्लिन सफल उनी पछिल्लो समय यसकै प्र’वद्र्धनमा स’क्रिय छन्। उनीपछि यस लि’स्टभित्र प’र्ने युवा म्यु’जिसियनहरूमा गायक ए’डी सि’रन र गायिका ए’डेल पनि टप ४० अन्तर्गत परेका छन्।
४ हजार ४ सय करोडकी मा’लिक्नि रि’हानाको सं’घर्ष सु’न्दा हरेकका आँखा र’साँछन्, बाबुको ह’र्कतका कारण आ’मासंग अ’लग बसी, आमाले हु’र्काएकी छोरी आज विश्वकै ध’नाड्य बनिन्, धै’र्य र क’र्म गरे दिन सबैका आ’उँछन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हुन् रि’हाना ।
नेपालकै अ’नौठो मन्दिर हेर्नुहोस, बत्ती बालेर सन्तानको बरदान दिने, मागेका सबै कुरा पुरा हुने विश्वास पूरा पढ्नुहोस्…
तल्लो जातका राजेश नेपालीले तीन बर्ष सम्म प्रेम गरेर क्षेत्रीको छोरी भगाएर गरे धुमधामसंग विवाह
दुबईकी राजकुमारीको बडीगार्डसँग अ’वैध स’म्बन्ध, कसैलाई न’बताउन भ’न्दै दिइन् २० करोड!
पुर्व मन्त्रि नबिन्द्रराज जोसीको अन्तिम बिदाईमा धेरैका आँखा रसाए